Black ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Jumpsuit - Buddhatrends
Black ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Jumpsuit
$48.00 $60.00 သငျသညျ (20% Save$12.00)
အသေးစား / Black က Black က / အလတ်စား အကြီးစား / Black က
အဆိုပါအနက်ရောင်ခြုံငုံ jumpsuit ကိုမဆိုအမျိုးသမီးရဲ့ပေါ့ပေါ့ wear စုဆောင်းခြင်းမှတို့သည်ကြီးစွာသောထို့အပြင်သည်နှင့်ရက်စွဲများသို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်သည့်အခါသူငယ်ချင်းများကိုအပါအဝင်အခါသမယအမျိုးမျိုးပေါ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏စတိုင်သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသွားစဉ်ကဝတ်ဆင်သကဲ့သို့သင်တို့မှထွက်မတ်တပ်ရပ်စေရန်သေချာ။ ၎င်းသည်သင်ပြီးသားသင့်ရဲ့ဗီရိုထဲမှာရှိတယ်ဘာပဲအချို့ပြောင်းလဲနေသောစတိုင်ကိုထည့်သွင်းဖို့သေချာသည်။
ဒါဟာအလုံးစုံတစ်ဦးအစိုင်အခဲပုံစံနှင့်ဖွဲ့နှင့်အနက်ရောင်လာနေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်, patterned စင်းသို့မဟုတ်ပင်တွေက dotted အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက်လာမယ့်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်္ကျီအဘို့ကြီးစွာသောပူးတှဲစေသည်။ဒါဟာကမ်းလှမ်းမှုအတူတကွမျိုးစုံအရောင်များကိုရောမွှေဖို့ဘက်စုံ wearers ။ ဒါဟာ frilly ရှပ်အင်္ကျီကနေ armless အင်္ကျီအထိအဝတ်အမျိုးမျိုးကျော်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ jumpsuit စတိုင်လည်းအရမ်းတင်းကျပ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်နေစဉ်, chic နှင့် classy တစ်ခုခုဝတ်ဆင်ရန်စွမ်းရည် wearers ပေးထားပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့်မိုးပြာရောင်ပစ္စည်းနှင့်ဖွဲ့ခြင်း, အနက်ရောင်ခြုံငုံ jumpsuit နေ့စဉ် wear အဖြစ်အသုံးပြုသင့်လျော်အောင်, ဂျင်း၏ကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ wearers ပေးပါသည်။ အဆိုပါမိုးပြာရောင်ကြည့်လည်းကျော်ဝတ်ဆင်သည်ကိုပစ္စည်းသမျှအမျိုးအစားချီးမွမ်းဖို့သေချာပါသည်။
၎င်း၏ပုံမှန်-type အမျိုးအစားမထိုက်မတန်နှင့်တကွ, အနက်ရောင်ခြုံငုံ jumpsuit နေဆဲ၎င်း၏စတိုင်ခံစားဆက်ထိန်းထားစဉ်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးကျော် fit ဖို့သေချာပါသည်။ ဒါဟာဒါဟာသင်ဤအသစ်အ jumpsuit ခန့်ရွှေ့သကဲ့သို့သငျနှစျသိမျ့မြင့်မားသောအဆင့်ကိုခံစားစေရန်ကိုလည်းလက်ျာဘက်မထိုက်မတန်ရဲ့ S ကို M ကအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလာနှင့်အယ်လ်!
(စင်တီမီတာ) ခါးအရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) Lenght
Ótimo produto exatamente como adorei descrição na
M က *** ဏ
Espectacular! es Tela vaquera recia မရှိ estira, pedí la talla Que uso normalmente y ကacerté, es Comodo, y de buena calidad, y ကtardó solamente una semana en llegar, muy recomendable, volveréတစ် pedir တစ် este vendedor အပြစ်တရား duda
Комбинезонсидитхорошо, запахапрактическинет။ Качествотканинеплохое, онаплотная, ноточтониткиторчатэтоминус။ Востальном - заказомосталасьдовольна။
ကို C *** ဂရမ်
Джинсыпростосупер! умницаПродавец! Оченьвсемдовольна: доставкамегабыстрая, качестводжинсаипошивотличныеиуказаннымразмерамсоответствуетбралам-кукаковерсайз။ рост 155, вес 46
L ကို *** s ကို
la mejor tienda, mucho DIA semana တစ်မက္ကစီကိုတစ်ဦး lo tardan ။ အထူးကောင်းမွန်သော
တကယ်ပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့ Jean jumpsuit တစ်ခုကိုနှင့်အထဲတွင်တရုတ်ထံမှအိုင်ယာလန်ဆီသို့ရောက် လာ. , ထိုအချိန်ကာလနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်! အရွယ်အစားအနည်းငယ်သေးငယ်သည်, ငါသည်အများသောအားဖြင့်တစ်ဦးကိုဗြိတိန် 10 ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်အရွယ်အစား M ကအမိန့်ထုတ်ပေမယ့်ငါ့ခြေထောက်ထိပ်န်းကျင်ငယ်လေးတစ်နည်းနည်းတင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မယ့်စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ နောက်တဖန်မဝယ်ပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး L ကိုလာမယ့်အချိန်ရပါ့။
: D *** ဏ
nice ကို item ။ အစာရှောင်ခြင်းပေးအပ်ခြင်း။ ပစ္စည်းနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်
Какнафото။ Черезкурьерскаяслужбу, надом။ Рекомендую! Качествохорошее
Яввосторге! Браланасвой 28-29 российскийразмер M က, вродеподошёл, нонемногожмёт, думаюрастянется။ Качествохорошее, доставилкурьер, присутствовалнебольшойзапах, нонебеда။ ДоТомскашлонеделитри
N ကို *** R ကို
estupendo! Tal cual en la ဓာတ်ပုံ!
K သည် *** တစ်ဦး
Комбезоченьмилый (когдаявнемчувствуюсебякакизсериалаотбросыахаха), нонеоченьфотогеничный, вжизнинамноголучшесмотриться, решилазаказатьМкаковерсайзнасвойэс, сидитсвободно, ядовольназаказомиснетерпениемждулетачтобначать егоносить)))) кстатитканьтопчик)
R ကို *** r
Lindo veio muito rápidoစားရကြ၏လိုလားသူ Brasil